चुट्किलाः जवान छोरीसँग बाऊकाे बिहे‍‍... - Everest Dainik - News from Nepal
चुट्किलाः जवान छोरीसँग बाऊकाे बिहे‍‍…
चुट्किलाः जवान छोरीसँग मेरो बाऊले बिहे गर्यो
एकजना मानिस मनोचिकित्सकको क्लिनिकमा गयो ।
डाक्टरले उसको परीक्षण गरेपछि कुर्सीमा राखेर सोधपुछ शुरु गर्यो ।
ल भन त तिमी पागल कसरी भयौ ?
बिरामीः मैले एकजना विधुवासँग विवाह गरेँ
डाक्टरः अनि के ठूलो कुरा भयो त, यत्तिकैमा पागल भइदिने ?
याे पनि पढ्नुस चुट्कीलाः नेपाल टेलिकमको नयाँ सेवा विवाह सेवा
बिरामीः पुरै कुरा त सुन्नुस् ।
डाक्टर ः ल भन के भयो त्यसपछि
बिरामीः के हुनु डाक्साब, उसको जवान छोरीसँग मेरो बाउले विहे गर्यो
अनि यसरी मेरो छोरी मेरो आमा भई
उनीहरुको घरमा फेरि छोरी जन्मिई
त्यो मेरो बहिनी भई तर म त उसको हजुरआमाको लोग्ने थिएँ
यसरी उ मेरो नातिनि पो भई
मेरो छोरोले आफ्नै बहिननीलाई पनि हजुरआमा भन्नुपर्यो
यसरी फेरी हेर्दा म आफ्नो छोराको भान्जा हुन पुगेँ ।
अनि मेरो बाउ मेरो ज्वाँई भयो
अनि मेरो आफ्नो छोरा हजुरबुवाको साला भयो अनि…।
डाक्टरः चुप साला, उपचार गर्न आ’को हो कि मलाई पनि पागल बनाउन ?
बिरामीः डाक्साब पुरै कुरा त सुन्नुस…..
अनि डाक्टर बेहोस
ट्याग्स: nepali jokes, नेपाली चुटकिला